Kungani Kufanele Ukhethe I-Hengsu Composite Decking - I-Dongguan Hengsu Green Building Material Co Ltd.
Ikhaya » Izindaba » Company Izindaba
Kungani Kufanele Ukhethe Hengsu Composite Decking
Isikhathi: 2017-09-21 Okuhamba phambili kwe-:
I-WPC Decking iba yinto ethandwa kakhulu emakhaya amaningi. Nakuba kungabiza ngaphezulu, kusengcono ukhetho olungcono ngenxa yezizathu eziningi.
Nazi izinzuzo ze-Hengsu Composite Composite WPC Boarding.
Kudinga ukugcinwa okuphansi
WPC decking kudinga yesondlo kuncane noma akukho nhlobo nhlobo ngoba uyakwazi yayo withstanding imithelela zemvelo nokhahlo. Ngakho-ke ungakwazi ukugcina ubuhle baso ngoba iminyaka eminingana. Icala ihlukile bendabuko ukhuni onezitezi. Izinkuni-plastic esiyinhlanganisela onezitezi musa ukubola , eziqondileyo discolor, zisonteke fade, noma ukuheha izimbungulu. ugodo Yemvelo kudinga oiling njalo futhi staining futhi lokhu singaba ebizayo. decking Composite ayidingi imidwebo ejwayelekile, staining noma uphawu futhi bakwazi ukumelana weathering, warping futhi umonakalo ngu emisebe yama-UV.
Inikeza ukuphepha okwengeziwe
Ngokungafani nezinye izinto zokhuni decking, WPC decking kuyinto izwibela-mahhala futhi ukushelela ukumelana. Lezi zimfanelo zibenza ikhaya ephephile izingane nezilwane njengoba kuphephile ukuhamba ezihlahla angenalutho ezinezinyawo ezine.
Yiqiniso bendabuko ukhuni decking kungenzeka Muhle kodwa iqiniso liwukuthi ngeke isikhathi eside. Harsh sezulu izimo ehlobo, entwasahlobo imbangela ebusika okuningi umonakalo azishiye egqwalile, ebolile, ahlukana futhi ugobile. Izinkuni-plastic onezitezi esiyinhlanganisela ibhekane yokukhiqiza inqubo eliyelelweko ukuqinisekisa uhambisane, kancane-yesondlo ezehlukile decking ukusebenza.
Izinkuni-plastic decking esiyinhlanganisela ngokuvamile efakwe luhlaka sub okusho ingasetshenziswa ukuze esikhundleni ugodo ebolile ngaphandle isidingo esikhundleni uzimele. Ngaphandle kwalokho, ngezansi ebusweni fixings ukwenza ukufakwa emphemeni amabhodi esiyinhlanganisela ngokuphelele kusheshe futhi kube lula.
Iningi lezinsiza ze-WPC ezikhohliswayo zenziwe ngezinto ezivuselelwa kabusha ezihlanganisa izinkuni eziqinile kanye nama-plastiki. Lokhu kunciphisa inani lempahla yokupaka impahla yasepulasitiki.
OKUDLULILEKOIsaziso sokuthuthwa kweNkampani
Ucingo: + 86-0769-22408970
I-MP: 0086-13532696601; 0086-13532696082
Ikhodi ye-Zip: 523790
Yiba ngowokuqala ukuthola izibuyekezo zethu,
Sicela uxhumane nathi ngeyodwa
I-copyright © 2016 i-Dongguan Hengsu i-Green Building Material Co Ltd. |Wonke Amalungelo Agodliwe | I-Powered By Worldsou